IRIS က F-20 Tigershark DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 152 ကို MB
downloads ရယူရန္ 25 976
အဆိုပါ IRIS က F-20 Tigershark IRIS အစောဆုံးထုတ်ကုန်များ၏တဦးတည်း၏တစ်စိတ်ကူးအသစ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ မူလက 2004 ပြန်တီထွင်ခြင်း, Tigershark ၏ဤဗားရှင်းသစ်နဲ့တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကကြည့်ရှုတတ်၏။
ထိပ်ကနေအောက်ခြေကို Remodelled နှင့်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကလေယာဉ်မော်ဒယ်, အသံများနှင့်သစ်တစ်ခုကို virtual cockpit featuring, ဒီထုတ်ကုန်ပြားချပ်ချပ်ထဲက, အပြည့်အဝအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာပျော်စရာအဘို့အဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးပါပြီ!
အဆိုပါလေယာဉ်များဟာ '' အဘယ်သို့လျှင် '' F-20 ၏အယူအဆပတ်ပတ်လည်အခြေပြုထုတ်ကုန်, ကဝန်ဆောင်မှုသို့သွားပြီးအဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သင် command ကိုမှာသယ်ဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိအတိအကျဘာအမြောက်တပ်ဖွဲ့ကိုရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုတစ်ဦးကမူထူးခြားတဲ့အမြောက်တပ်ဖွဲ့ Manager ကို။
များအတွက်အထူးစိတ်ကြိုက်ပွတ်ဆွဲ 360 ဒီဂရီအသံနှင့်တာဘိုင်အသံစတူဒီယိုကနေတစ်ဦးကထိပ်တန်း soundset FSX.
ထိပ်တန်းရာသီဥတုဒါဏ်များနှင့်ငါးအထူးပြုအမြင်အာရုံမော်ဒယ်များအပေါ်အမြင်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအတွက်ခွင့်ပြုမရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးအနုပညာနည်းစနစ်၏အသုံးချနေတဆယ်နှစ်လုံးကိုကျော်ထိပျတနျး paintschemes ၏တစ်ဦးကရှေးခယျြမှု။
Mach2+ အမြန်နှုန်းနိုင်စွမ်း airframe ပျံသန်းဖို့တစ်ဦးနှင့်တည်ငြိမ်သောပျော်စရာအတူသင်တို့သည်အထိမြေပြင်ကနေဒီဇိုင်းထုတ်တစ်ဦးကထိပ်တန်းလေယာဉ်မော်ဒယ်။
အပြည့်အဝ 3D 20D afterburner ရွေ့လျားတွေနဲ့ F-3 သွက်လက်ပေါ်မှာအိပ်ဇော vectoring ထိုး!
သငျသညျကိရိယာပျက်ပြား, စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းနှင့်ပိုပြီးနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသည့် IRIS က F-20 Tigershark စနစ်များနှင့်လေယာဉ်လုပ်ကိုင်ရန်သိရန်လိုအပ်သမျှအချက်အလက်တွေကိုနှင့်အတူတစ်ဦးအနက်အတွက်လေယာဉ်မှူးလက်စွဲစာအုပ်။
ဗီဒီယိုက F-20 Tigershark - က Grand Canyon အဖွဲ့စည်းခြင်းပျံ